Akụkọ - Ngwa nke carbon fiber ihe n'ime ụgbọ ala
Ngwa nke carbon fiber ihe n'ime ụgbọ ala
A na-ahụkarị eriri carbon na ndụ, mana mmadụ ole na ole na-aṅa ntị na ya.Dị ka ihe na-arụ ọrụ dị elu nke a maara nke ọma na nke a na-amaghị, ọ nwere njirimara dị iche iche nke ihe carbon-ike, na njirimara nhazi nke textile fibersoft.A maara dị ka eze ihe.Ọ bụ ihe dị elu nke a na-ejikarị n'ụgbọelu, rọketi, na ụgbọ ala anaghị agba ngbo.
A na-eji eriri carbon eme ihe n'ọtụtụ ebe, ngwa ya n'ime ụgbọ ala na-etowanye nke ọma, nke mbụ n'ime ụgbọ ala ịgba ọsọ F1.Ugbu a a na-ejikwa ụgbọ ala ndị nkịtị, ihe ndị na-emepụta carbon fiber ekpughere n'elu nwere ụkpụrụ pụrụ iche, mkpuchi ụgbọ ala carbon fiber na-egosi mmetụta nke ọdịnihu.
Dị ka onye na-emepụta ụgbọ ala na drones, China abụrụla ahịa ngwaahịa akụrụngwa nke ọtụtụ ụlọ ọrụ esenidụt na ndị na-anụ ọkụ n'obi na-ahọrọ carbon fiber.Anyị nwere ike hazie ọtụtụ ejibeghi carbon eriri ngwaahịa, dị ka carbon eriri etiti, carbon fiber ọnwụ akụkụ, carbon eriri obere akpa.
Edison chepụtara carbon fiber na 1880. Ọ chọpụtara eriri carbon mgbe ọ na-anwale filament.Mgbe ihe karịrị 100 afọ mmepe na ọhụrụ, BMW ji carbon fiber na i3 na i8 na 2010, na kemgbe ahụ malitere ngwa nke carbon eriri na ụgbọala.
The carbon fiber dị ka ihe na-agba ume na resin nke matrix ihe mejupụtara carbon fiber mejupụtara ihe mejupụtara.Emere ka ọ bụrụ mpempe akwụkwọ carbon fiber anyị na-ahụkarị, tube carbon fiber, ọganihu carbon fiber.
A na-eji eriri carbon eme ihe na okpokolo agba ụgbọ ala, oche, mkpuchi ụlọ, oghere ụgbọala, enyo anya azụ, wdg. Ụgbọ ala ahụ nwere ọtụtụ uru.
Dị arọ: Site na mmepe nke ụgbọ ala eletrik ọhụrụ ike, ihe ndụ batrị chọrọ na-arị elu na elu.Mgbe ị na-agbalịsi ike maka ihe ọhụrụ, ọ bụ ụzọ dị mma ịhọrọ ma dochie ya site na nhazi ahụ na ihe.Ihe mejupụtara fiber carbon bụ 1/4 dị ọkụ karịa ígwè yana 1/3 dị ọkụ karịa aluminom.Ọ na-agbanwe nsogbu ntachi obi site na ibu ibu ma na-echekwa ike karị.
Nkasi obi: arụmọrụ gbatịa dị nro nke eriri carbon, ụdị ọ bụla nke ihe mejupụtara nwere ike dabara nke ọma, ọ na-emeziwanye mkpọtụ na njikwa mkpọtụ nke ụgbọ ala ahụ dum, ọ ga-eme ka nkasi obi nke ụgbọ ala dịkwuo mma.
Ntụkwasị obi: eriri carbon nwere ike ike ọgwụgwụ dị elu, mmetụta ike ike ya dị mma, ọ ka nwere ike ịnọgide na-enwe ike na nchekwa ya mgbe ọ na-ebelata ibu nke ụgbọ ala, na-ebelata ihe ize ndụ nchekwa nke dị arọ na-ebute, na ịba ụba nke ndị ahịa ntụkwasị obi nke ihe carbon fiber. .
Ndụ emelitere: Akụkụ ụfọdụ nke ụgbọ ala nwere ụkpụrụ dị elu na gburugburu ebe ọjọọ, nke dị iche na enweghị ntụkwasị obi nke akụkụ ọla nkịtị na gburugburu ebe obibi.The corrosion eguzogide, elu okpomọkụ nguzogide, na waterproof Njirimara nke carbon eriri ihe na-eme ka ojiji nke ụgbọala akụkụ ndụ.
Na mgbakwunye na ubi ụgbọ ala, a na-ejikwa ya n'ọtụtụ ebe na ihe ndị dị mkpa kwa ụbọchị, dị ka egwu-carbon fiber guitar, ngwá ụlọ-carbon fiber desk, na ngwaahịa eletrọnịkị-carbon fiber keyboard.